Mandrahona ny mariky ny lova eran-tany ny fihafotsiana goavan’ny Grande Barrière de Corail · Global Voices teny Malagasy
Tranga fanintelony goavana indrindra tanatin'ny telo taona antso fanairana hafa
Voadika ny 24 Avrily 2020 16:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, Ελληνικά, Français, عربي, Nederlands, English
Fanadihadiana momba ny haratsin'ny fihafotsian'ny vatohara ao amin'ny Nosy Orpheus tamin'ny 2017 – Sary avy ao amin'ny kaonty Flickr-n'ny Foibem-pahombiazana ARC ho an'ireo Fianarana momba ny Haran-dranomasina (CC BY-ND 2.0)
Raha toa ka saika mifantoka tanteraka amin'ny krizin'ny COVID-19 ny media eran-tany, niaina tranganà fihafotsiana goavana fanintelony tanatin'ny dimy taona kosa ny Grande Barrière de Corail an'i Aostralia. Ny hafanan'ny maripana an-dranomasina no heverina fa miteraka ireo fiantraikany ratsy ireo amin'ireo faritra lehibe misy haran-dranomasina.
Nahitàna fihafotsiana diso tafahoatra an'ireo vatohara akaikin'ny morontsiraka. Na dia tsy voatery ho faty aza ireo vatohara voafotsy ireo dia mety ho faty ihany raha toa ka mijanona avo ny maripana. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ireo fonenan'ny zavamiaina hafa anaty ranomasina ihany koa ny fihafotsiana.
Tsy ilaina akory ny miteny fa dia tsy nahazo ny fifantohana mendrika azy tao anaty aterineto io vaovao ratsy farany io; nefa kosa, naniry ny hanasongadina ny fiantraikany sy hampivondrona ireo andian'olona mandray anjara mavitrika anatin'ny resaka mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro:
Amin'izao fotoana efa ijalian'ny maro amintsika izao, tena saro-devonina ity vaovao ity. Tsy handositra akory ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ary mila antsika rehetra ho salama sy hierendoza izy io mba handreseny.
Naka fotoana nanehoana hevitra ny sasany tamin'ireo Aostraliana. Nitoraka bitsika ny Profesora mpikaroka momba ny zavamananaina bitika, David Osborn, avy ao amin'ny anjerimanontolo RMIT ao Melbourne:
Tsy hitako omaly, fa vaovao mampitaintaina kokoa – tranganà fihafotsiana goavana ny vatohara manerana ny Grande Barrière de Corail, fanintelony tato anatin'ny 5 taona.
Rehefa vita ny COVID19 miaraka amin'ny toekarena marefo dia marefo, tsy afaka ny tsy hiraharaha ny fiovaovan'ny toetrandro isika.
Nizara ity pikasary avy any an'habakabaka ity ny Profesora Teery Hughes, Talen'ny Fiobem-pahombiazana ARC ho an'ireo Fianarana momba ny Haran-dranomasina ao amin'ny Anjerimanontolo James Cook ao Queensland.
Andro iray nahasosotra, nahatorovana momba ny Grande Barrière de Corail ity.
Mahatsapa tena ho toy ny mpitia zavakanto mamakivaky ny Louvre…raha izy iny may tanteraka iny aho.
Nisy valinteny sasany avy any ampitan-dranomasina tao amin'ny tambajotra sosialy. Nahatsiaro voadoana mafy tamin'io vaovao io ny mpampianatra iray any amin'ny anjerimanontolo any ivelany:
Ary eo ihany koa ny tranganà fihafotsiana miparitaka be anatin'ny Grande Barrière de Corail. Vita ny amintsika.
Nizara horonantsary iray ny mpitsikera malaza momba ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny angovo madio avy ao Singapaoro, Assaad Razzouk:
Mandritra izany fotoana izany, manohy mihetsika na aiza na aiza ny rahona ateraky ny toetrandro. Taorian'ireo afo mandoza, voadoana indray i Aostralia satria miatrika fihafotsiana goavana fanintelony tato anatin'ny dimy taona ny Grande Barrière de Corail, naterak'ireo maripana an-dranomasina mafana kokoa.
Toeran'ny Lova Eran-tany manana “lanja goavana na ara-tsiansa na ara-voajanahary”.
Nipoitra ihany koa ny firesahana tsy azo ihodivirana ilay valanaretina maneran-tany:
Niharanà tranganà fihafotsiana goavana indray ny Grande Barrière de Corail, fantatro fa miatrika loza maneran-tany tsy mbola nisy toa azy isika noho ny Coronavirus kanefa miatrika loza vitsivitsy ihany koa amin'ny harambato, izay tsy azontsika avela amin'izao.
Fara-faharatsiny, afaka manolo ny Grande Barrière de Corail aminà sambo goavana mpitatitra mpizahatany rendrika isika!
Nisy vitsivitsy tamin'ireo be fisalasana mahazatra no nametra-panontaniana ny amin'ny anjara asan'ny fiovaovan'ny toetrandro, isan'izany i Reiver:
Zavatra miverimberina io, miforona eo amboniny ny vatohara vaovao ary izany no nahatonga azy ho Grande Barrière de Corail.
Amin'izao fotoana izao, midina toy ny ankamaroan'ny toekarena ny fizahantany ao Aostralia. Maro ireo olona maneran-tany no manantena fa afaka hahita ny zavamahagagan'ny vatohara ireo mpitsidika rehefa mifarana ny fahamehana noho ny coronavirus:
Teny nindramina tamin'ity androany ity
“Miaraka amin'ny fanampiana, afaka arenina ny sehatry ny fizahantany aorian'ny Covid-19, saingy tsy hisy izany raha tsy misy Grande Barrière de Corail salama tsara hotsidihana vantany vao vita ity krizy ity.” Kate Smolski